မိုးသီးဇွန် ဘာကြောင့် ပြည်တော် ပြန်ဝင်ရတာလဲ…. | NEW BURMA MEDIA
မိုးသီးဇွန် ဘာကြောင့် ပြည်တော် ပြန်ဝင်ရတာလဲ….
September 6, 2012 — newburma အပေါ်ပုံကို မိုးသီးဇွန် ဂျာမနီကို သွားပြီးတော့ မွတ်စလင် အဖွဲ့နဲ့ ပေါင်းစည်းကာ တောင်းစားရေးနဲ့ ပေါင်းစားရေး အစည်းအဝေးမှာ အမှတ်တရ ရိုက်ထားတာပါ။ ပေးပို့သူက အဲဒီပုံကို ဒီလို မှတ်ချက် ပေးထားပါတယ်။
((( မိုးသီးဇွန်နဲ့ဂျာမဏီက ရိုဟင်ဂျာ ဥက္ကဌ George Khan တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ
ရှိတယ်..သူတို့ တွေက အမြဲဆက်သွယ်ပြီး မူစလင်တိုင်းပြည်တွေက
ငွေတွေ ယူပြီး တွဲလုပ်နေကြတယ် )))
အခု ကျနော်က မိုးသီးဇွန်ကို မုန်းလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူနဲ့လည်း ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ ဘာကြောင့် ပြန်ဝင်လာရသလဲ။ သူပြန်ဝင်လာတော့ အောက်က အဖွဲ့အစည်းတွေက ဘာလို့ ကြိုဆိုကြတာလဲ ဆိုတာကို ယှဉ်ပြီးတော့ နှိုင်းပြချင်လို့သာ တွဲတင်လိုက်တာပါ။ ပုံမှာ ပါတဲ့ သူကိုလည်း ယှဉ်ကြည့်ကြပါ။
« Burmese Comedy or Hartha Collection of “Dart Si & Dart San” 1967